Neymar Oo Ka Quustay Riyadiisii Inuu KU Biiro Kooxda Barcelona – Heemaal News Network
Neymar Oo Ka Quustay Riyadiisii Inuu KU Biiro Kooxda Barcelona
Neymar ayaa sii joogi doona kooxda Paris Saint-Germain xilli ciyaareedkan ka dib markii ay kooxda Faransiiska ku guuldareysatay inay heshiiska kala gaarto iibkiisa kooxda Barcelona sida ay shaaciyeen Sky Sports, Globe Esporte iyo jariirada Faransiiska ee L’Equipe.
Kooxda reer Catalan ayaa rajo ka qabtay inay dhameystirto heshiis wadar ahaan ku kacaya 250 milyan euro ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Yurub 2da bisha September.
Neymar ayaana ogolaaday inuu sii joogo PSG ka dib markii ay burbureen wadahadaladii u dhaxeeyay kooxda Faransiiska iyo Barcelona.
Waxaa la fahamsan yahay in Neymar uu balanqaaday inuu ixtiraamayo inta ka hartay qandaraaskiisa PSG islamarkaana uu ka soo baxayo waajibaadkiisa kaga aadan kooxda marka uu ka soo laabto kulamada caalamiga ah.
PSG ayaa diiday inay hoos u dhigto qiimaha ay ku dooneyso ciyaaryahanka oo ah 150 milyan euro oo lagu daray la wareegista Ivan Rakitic iyo Jean Clair Todibo iyo inay amaah ku qaataan Ousmane Dembele hal xilli ciyaareed, halka Barcelona ay taagneyd inay bixinayaan 130 milyan euro iyo seddex ciyaaryahan.
Neymar ayaa la sheegay inuu soo dhex galay isagoo diyaar u ahaa inuu bixiyo 20ka milyan euro ee ah farqiga u dhaxeeyay labada kooxood, laakiin waxaa arintaas diiday PSG kuwaasoo tilmaamay in ciyaartoyda heshiiska ku jira inaysan ogoleyn inay u wareegaan Paris.
Ousmane Dembele ayaa ka mid ah xiddigaha ka biyo diidsan heshiiska iyadoo wakiilkiisa uu ku adkeystay in xiddigaan uu baaqi ku sii ahaanayo Camp Nou xilli ciyaareedkan.
Wargeyska Faransiiska ee L’Equipe ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka uu ka quustay inuu baxo xagaagan waxaana uu u sheegay Paris Saint-Germain inuu sii joogi doono kooxda.
Waxay sidoo kale sheegeen in Neymar uu ku wargeliyay qoyskiisa inuu sii joogi doono caasimada Faransiiska.
Wakiiladiisa ayaa sidoo kale lagu waramayaa inay ku wargeliyeen labada kooxood ee PSG iyo Barcelona in ciyaaryahanka uu diyaar u yahay inuu sii joogo Parc des Princes.
Khabiirka kubada cagta Spain Guilleme Balague ayaa isna ku raacay jariirada L’Equipe in Neymar uu go’aansaday inuu sii joogo Pais Saint-Germain isagoo Twitter ku soo qoray:
“Sheekada halkaas ayay ku dhamaatay. Waa ay dhici weysay…Neymar hal xilli ciyaareed kale ayuu sii joogayaa PSG ama miyay dhamaantood doonayeen inay dhacdo? Waan soo warwarsan doonaa, waxaana maalmaha soo socda wax ku qori doonaa BBC Sport”
PSG weli wax hadal ah kama oranin warkaan cusub ee ay baahinayaan Sky Sports iyo warbaahinta Brazil ee Globe Esporte iyo wargeyska Faransiiska ee L’Equipe.
Bayle: Alshabaab Way Nagu Dhex Jiraan Awoodna Uma Lihin Aan Ku Aragno
Taliska Booliiska Oo ka Warbixiyay Xidhiga Wasiirkii Amniga Jubbaland.